ရောဂါဗေဒပညာတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာရဲမြဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ ရောဂါဗေဒနှင့် ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လာရောက်တင်ပြမှုအား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂) ရက်
ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးသည် နိုဝင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်္ဂလန်နိုင်ငံတို့အကြား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ဆေးပညာသင်ကြားရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်အရ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့များအနက်မှ ရောဂါဗေဒပညာတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာရဲမြ၊ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာဌေးဌေးတင် (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဓါတ်ခွဲ) ဒေါက်တာသင်းသင်းလှိုင် (Country Director, အင်္ဂလန်နိုင်ငံ THET အဖွဲ့) တို့မှ ရောဂါဗေဒပညာတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အစုအဖွဲ့မှ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာရဲမြဦးဆောင်သောအဖွဲ့မှ ရောဂါဗေဒနှင့် ဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လာရောက်တင်ပြမှုအား ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ် (၄)၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဒေါက်တာသင်းသင်းလှိုင်က -
• အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ ပညာရှင်များပါဝင် သော လေ့လာဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့က ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးနှင့် အမျိုးသားဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (NHL) တို့၏ ဓါတ်ခွဲခန်းများ ISO ရရှိရေး အဆင်သင့်ဖြစ်မှုအခြေအနေ (readiness)၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးမှုအခြေအနေ (service delivery)၊ လူသားအရင်းအမြစ် (Human Resource)၊ သတင်းအချက်အလက်ပညာ (Information Technology) အခန်းကဏ္ဍများကို ဆန်းစစ်ခဲ့ သည့်အစီရင်ခံ၏ စိစစ်တွေ့ရှိချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။
တင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက -
• "ISO 15189" နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဓါတ်ခွဲဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအားလုံး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိရှိအောင် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (၁)ရက် လုပ်စေလိုကြောင်း၊
• အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများဆောင်ရွက်ပြီးပါက check-list များအသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ရန်လိုကြောင်း၊
• နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိသော ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင် (၁)ဦးအား Public Health England ကတာဝန်ယူ၍ ခန့်ထားပေးမည်ဟုသိရှိရပါကြောင်း၊
• ဆေးရုံများရှိ ဓါတ်ခွဲခန်းများတွင် စက်ပစ္စည်းများအသုံးမပြုဘဲ ပိုလျှံနေသည်များရှိပါက ဥပမာ (Flow Cytometry) အခြားလိုအပ်သည့်နေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
• ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်(ဓါတ်ခွဲ) ဦးဆောင်ပြီး နိုင်ငံတဝန်းမှ ဓါတ်ခွဲခန်းများအားလုံးကို (Quick Holistic Review) အမြန်ဆန်းစစ်ပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊
• ဓါတ်ခွဲခန်းသုံးပစ္စည်းများ ပြတ်လပ်မှုမရှိစေရေး အတွက်လည်း ဝယ်ယူမည့်ကုမ္ပဏီများနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာ၌ ပစ္စည်းပို့ရာတွင် (၃)လ (၁)ခါ ဖြစ်စေ အပိုင်းလိုက်ပို့ဆောင်စေရန်အချက် ထည့်သွင်းရေးသား ထားရန် ဂရုပြုရမှာဖြစ်ကြောင်း၊
• ဓါတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာအချက်အလက် နည်းပညာများအတွက် ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ဆောင်ရွက်နေသောစနစ်ကို အခြား တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များပါ သိရှိရန် ဆေးရုံအုပ်ကြီး/ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာရီရီမြင့် ဦးဆောင်ပြီး ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊
• လိုအပ်သည့် computer များကို ဝန်ကြီးဌာနက ပံ့ပိုးပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပါမောက္ခ ဒေါက်တာရဲမြက -
• ကင်ဆာရောဂါ ရောဂါရှာဖွေမှုနှင့်ပတ်သက်၍ American Society of Clinical Pathology (ASC) နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေ၊ Telepathology အွန်လိုင်းသင်တန်းဆောင်ရွက်လိုမှု ကိစ္စရပ်များ၊ Dr. Med. Sc (Pathology) သင်တန်း-အထူးပြုအနေဖြင့် Histopathology ၊ Haemotopathology ၊ Chemical Pathology ဘာသာရပ်များ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရန်ကိစ္စ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ ကာလတိုသင်တန်း စေလွှတ်၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရန်ကိစ္စ၊ M.Sc (Family Medicine) ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စ၊ ဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ် (၆၀,ဝ၀ဝ) ခန့်ပါဝင်သည် CME (online) ဖွင့်လှစ်ရန် World Medical Association နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များတို့ကို တင်ပြဆွေးနွေးပါသည်။
• အွန်လိုင်းမှ ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာသင်တန်းပို့ချရေး (Telepathology) ဆောင်ရွက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံ IUHW နှင့်ဆောင်ရွက်သည့် အတွေ့အကြုံအရ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ဦးဆောင်မှုပေးရန်ဖြစ်ကြောင်း၊
• Dr. Med. Sc ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
• အလုပ်ကြိုးစားပြီး တာဝန်ယူစိတ်ရှိသည့် မျိုးဆက်သစ်ရောဂါဗေဒဆရာဝန်များထဲမှ သေချာစွာ ရွေးချယ်၍ နိုင်ငံတော်စရိတ်ဖြင့် ကာလတိုပညာသင်စေလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
• ကင်ဆာရောဂါ ကုသရေးအတွက် Joint Tumor Board ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ပြန်လည်အသက်သွင်းနိုင်ရေး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊
• ဆေးရုံများမှဓါတ်ခွဲနမူနာများ ပြင်ပသို့ပို့နေရခြင်းများအတွက် ဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့် သက်ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်များ၊ ရောဂါဗေဒ ဆရာဝန်များအားလုံး ပူးပေါင်းအဖြေရှာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဝန်ကြီးဌာနက လိုအပ်သည်များကို ပံ့ပိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
• CME (online) တွင် ဆရာဝန်များပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် တစ်ဦးလျှင် (၁)နှစ်ကို (၁.၆)ဒေါ်လာခန့်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ရာ လူများစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကျခံပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
• M.Sc (Family Medicine) ဖွင့်လှစ်ရန်ကိစ္စအတွက် ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာနက တက္ကသိုလ်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
• ယခုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများအရ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များကို တာဝန်ရှိသူများက သေချာစွာဂရုစိုက်၍ ရောဂါဗေဒပညာ တိုးတက်ရေးနှင့်လူနာများအား ရောဂါရှာဖွေကုသရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက်ကာ လူနာများအား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပိုမိုပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ပါမောက္ခဒေါက်တာသက်ခိုင်ဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။